Jasmine : September 2017
ပေါက်ကရ ရင်ခုန်သံစစ်စစ်များ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး စံပယ်ပန်းများနဲ့မိုးထားသော ကဗျာလွင်ပြင်
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, September 10, 2017
အမြဲတမ်း ရင်ဘတ်ထဲ တိုက်ရိုက်အချိုးနဲ့ဝင်ပါတယ်
ရိုးရိုးလေးတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒို့ ၂ယောက်အကြောင်း
ပုံတိုပတ်စ ပြောတတ်တဲ့သူ တယောက်မှမရှိတာ
သူတို့ဘ၀မှာ ပုံတိုပတ်စတွေအကြောင်းမကြားခဲ့ဖူးလို့ပါ ။
ချစ်သူနှလုံးသားကိုခြုံရင်အစစအရာရာလုံတယ်ထင်ခဲ့မိတာ ခုတော့သိပြီ မှားနေတယ်ဆိုတာ ။
ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး နေတတ်တဲ့ကိုယ်က နေရာတကာမှာပင်ပန်းနေရတယ်
တက်ကြွမှုတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာတော့လဲ တိတ်ဆိတ်ခြင်း ကိုမုန်းတည်းလာမိတယ် ။
ထို့ကြောင့် ကျွန်မ မှတ်တမ်းမရေးတော့ပါ
တကယ်တန်း ကျွန်မမြင်နေရတဲ့ သက်တန့်ကို
September9- 2017
Labels: ခံစားချက် ကဗျာ
http://kokomaunguk.blogspot.com/(သာဂျီးမင်း) စံပယ်ချို အမယ်အို တကယ်ပျို။ မွေးနေ့မှာ ထွေးပွေ့စရာ ပြေးတွေ့ရှာ။ ရည်စူးကာနေ ကြည်နူးပါစေ သီ...
အမှောင်ခန်း လေးထဲ ချောင်ထိုးခံနေရတဲ့ စိတ် တ်ိတ်တိတ်လေးထွက်ပြေးလို့ ရွက်လွှင့်လိုက်ချင်မိတယ် လ မသာတဲ့ညမှာ ကြယ်လေးတွေ ပြူတစ်ပြူတစ်န...
~ပင်ပန်း နွမ်းနယ် မှုတွေကို ပြေပျောက် စေမယ့် ခြေထောက် ဆားစိမ်နည်း~
တစ်နေကုန် အလုပ်တွေ လုပ်နေ ရလို့ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေသူများ၊ ကိုယ် လက်မအီမသာ ဖြစ် သူများ အတွက် ပေါ့ပါး လန်းဆန်း စေရုံသာမက ခြေဖ နောင်...
အလွမ်းအဆွေးကဗျာတွေအရေးများခဲ့တယ် တကယ်တော့ ကျွန်မဘ၀က အလွမ်းအဆွေးမရှိခဲ့ပါဘူး။ အချစ်အကြောင်းတွေဖွဲ့လိုက်နွဲ့လိုက်နဲ့ရေးခဲ့တယ် တကယ်တော့ ...
ကျွန်မ ကြိုက်၏.....မကြိုက်၏ (Angelhlaing ရဲ့တဂ်ပို့စ်)
Angelhlaing ရဲ့တဂ်ပို့စ် ဆိုပေမယ့် မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ကလည်းတစ်ခါထပ်ပြီး တဂ်ထားတယ်နော်၊ အမှတ်တရလေးလုပ်ပေးပါတဲ့ ဆိုပြီး တောင်းဆိုပြန်တယ်........
ငါ ဘယ်တုန်းကမှ အကျဉ်းသားမဟုတ်ခဲ့သလို ငါ ဘယ်သောအခါမျှ လွတ်လပ်ခွင့်မရခဲ့ပါ ငါ မင်းကို ဘယ်တုန်းကမျှ မမုန်းခဲ့ပါ သို့သော် ချစ်လဲ မချ...
ဥတုရဲ့ ဒါဏ်ကြောင့် ကျွန်မချစ်တဲ့သစ်ပင်လေးတွေ အရိုးပြိုင်းပြိုင်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ် တခါက ထားတဲ့ဖူးတဲ့ အချစ် စစ်စစ်အတွက် အလွမ်း ရိုင်းရု...
မွေးနေ့ အမှတ်တရ ကဗျာများ
မစံပယ်မွေးနေ့ အ မှတ်တရ စံ ပြနေရာထား ရေ လာက်အောင် ပယ် မခံရတဲ့ကိုလွင်ပြင်ရဲ့ ချို မွေးချစ်စရာကောင်းသော သူကလေး ဘလော့က စလို့သိ...
အလွမ်းရိပ်တို့အစဉ်ခစားနေတဲ့ မေမေရဲ့ ကောင်းကင်ပြင်ကြီး ကျွန်မ ဘယ်တော့များမှ ကြယ်စင်ဖြစ်ခွင့်ရှိမလဲ စဉ်းစားရင်း တွေးတောရင်း အိုမင်းလု...
စံပယ်ချစ်လင် ကိုလွင်ပြင်မွေးနေ့ အတွက်ဆုတောင်း ကဗျာ
မနက်တိုင်းပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး စဉ်းစားမိတာ ရင်မှာ နှိုင်းမရ အတိုင်းအဆမဲ့တဲ့ ချစ်သူရဲ့ အကြင်နာ ရင်နာစရာအကြောင်း လုံးဝ မရှိခဲ့ဘူ...
-ကျွန်မ သည် ကဗျာဆရာမတစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။ ကဗျာတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး ရင်ခုန်သံ စစ်စစ်တွေကို ကဗျာအဖြစ်ဖန်ဆင်းနေထိုင်သူ တစ်ယောက်သာ။ ကဗျာအတွက်ရင်ခုန်သံတွေရှာဖွေဖန်ဆင်းနေသူလဲမဟုတ်ပါ။ jasmine -
Tuesday, February 14, 2011 ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူသစ်ပင်လေးမှ ကဗျာရူး စာရူး ကျွန်မအတွက် အမှတ်တရဖွင့်ပေးခဲ့သောဆိုဒ်လေး(သို့မဟုတ်) ကျွန်မ နှလုံးအိမ်လေးဖြစ်ပါသည်။
( တဂ်ပို့စ်) (10)
ခံစားချက် ကဗျာ (9)
အလွမ်း ကဗျာ (1)
jasmine(ဆုံးဖြတ်ပါ ချစ်သူ ကဗျာမှ)
"လူဆိုတာ တစ်နေ့တော့ သေကြရမယ့်သူတွေချည်းပဲ။ မသေခင် ရသမျှအချိန်လေးမှာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ကို ခွဲခြားသိဖို့ မကောင်းတဲ့အတွေး၊ မကောင်းတဲ့ စိတ်အကြံ၊ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေကို နေ့တိုင်း တစ်နေ့တစ်ခါလောက်ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆင်ခြင်ကြည့်ရင် အကုသိုလ် အလုပ်တွေ မလုပ်မိအောင် အလိုလို ရှောင်ကြဉ်ပြီးသား ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်"
ပုဇွန်ချဉ်လုပ်နည်း - ဒီနေ့တော့ ပုဇွန်ချဉ်လေး ထည့်ထားတာ ရလာပြီမို့လို့ ပုဇွန်ချဉ်ထည့်နည်း များစွာထဲက နောက်တစ်နည်းနဲ့ ထည့်ဖြစ်ထားပြီး မာမာပြင်ဆင်ပြီး ထည့်ထားတဲ့ ပုဇွန်ချဉ် ထည့်...
အိမျတှငျးအောငျးရငျး..။ - ဖတျလကျစ စာအုပျကိုခထြားပွီး ကျောဖီထဖြျောတယျ ရနှေေးဆူဆူထဲ လကျဖကျခွောကျထပျထဲ့တယျ ဘာရေးရငျကောငျးမလဲ စဉျးစားတယျ ဘာမှမရေးတာ ပိုကောငျးတယျလို့ တှေးရငျးပွုံးမိတယျ မ...
ကိ န်န ရာ... ၆ပေ ခွား ( ၈ ) - ခဈြမိုးကွီး မခွိမျးတော့ စဈဆိုးမီး မငွိမျးသေး။ ဒီလို ခတျေမြိုးထဲ (ကိုဗဈ 19 ဆိုတဲ့) အဖွဈဆိုးလညျး မသိမျးသေး။ ကိုဗဈကမ်ဘာမှာ ငါတို့ဟာ သားကောငျ။ ဦးရဈပန...
My Vitamins..... - ဘဝမှာ နဝေငျခြိနျအလှ Sunset ကို ရနျကုနျမွို့လိုနရောမြိုးမှာ နစေ့ဉျရကျဆကျကွညျ့ရလိမျ့မယျလို့ မတှေးထားခဲ့ဖူးဘူး...။ မြားသောအားဖွငျ့ Sunset ကို ပငျလယျကမျးခွ...
2020 လူသား - မင်ျဂလာပါရှငျ~~~ ၂၀၂၀ ခုနှဈကကမ်ဘာကွီးတညျရှိနသေရှေ့ မှတျတမျးတငျထားခံရမဲ့အခြိနျကာလတခုပါဘဲ။ ကွားဖူးဆိုဖူး‌ပွောဖူးသမြှစကားတှဟော လကျဖဝါးကနလေကျဖမိုးကိုမှောကျလှန...
မန်တလေးက လာတဲ့လူ(မကျြနှာဖုံး နဲ့ ကိုယျရေးအကဉျြး) -
Kiss the rain .... - မရေီလနျးမှာတုနျးက ဆူနမျ၊ ရာမား၊ အမျးထရူးမှာ ဂဈတာရှိတော့ ဂဈတာသငျမယျဆိုပွီး ဂဈတာဝယျတယျ။ ယူကြူ့ကနသေငျတာ ကီးနှဈခုအပွောငျး လကေ့ငျြ့တဲ့နရောမှာ တဈနတေယျ။ ဂဈတ...
သာ​အေး သို့​ပေးစာ (အတိုအထှာ) - “ကို သာ​အေး” “​ဟေ ဘာလဲမိနျးမ” “ရှာက ရှငျ့ညီမ ဆီက စာ လာတယျ​” “ဟာ ပွဿနာပဲ။ ငါ့ မကျြ​မှနျ​ ကှဲ​နတော အသဈ​မလဲရ​သေးဘူး။ ဒီလိုလုပျ​ကှာ မငျးငါ့ကိုဖတျ​ပွ” “မဖွစ...
တရားထိုင်ခြင်း၏ အကျိုးအာနိသင်များ - ဒီကနေ့မနက် ထုံးစံအတိုင်းမနက် ၄နာရီမထိုးခင်နိုးလာတဲ့အခါ တစ်ကိုယ်လုံးလေးလံနေတယ်၊ အမြဲတန်းလို ပေါ့ပါးမနေဘူး၊ ဒီတော့ကာ အိပ်ယာကနေ ချက်ခြင်းမထသေးပဲ ဖေါက်ပြန်တဲ့...
ကုိုဗစ်ဆုတောင်းမေတ္တာ - ဒေါ်အောင်နဲဆန်းစုကြည်နဲ့ တကွ ကုိုယ့်ရဲ အနီးအဝေး မိတ်ဆွေများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ဆွေမျိုးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံသူနုိုင်ငံသားအားလုံး၊ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံး၊ အခု...
ကပျ ကွီး ပွီး သှား တဲ့အခါ - ကပျ ကွီး ပွီး သှားတဲ့အခါ … ကံကောငျးသူတှကေ မွကေမ်ဘာကနေ ထှကျသှားနှငျ့ခဲ့ကွပွီ။ သူတို့ .. အငတျဘေး ၊ ရောဂါဘေး ၊ စဈဘေး ၊ ဥပဒမေဲ့ဘေး တှကေနေ လှတျမွောကျသှားခဲ့ကွ...
Labor Law In Myanmar - 1) 31-8-2015-EC.pdf 2) 1923.pdf 3)1934.pdf 4) 1948.pdf 5) 1951 Factory Act .pdf 6) 1952 Leave and holiday.pdf 7) 1959 employment contract.pdf 8) 2011 labour...
လမ်းပေါ်က ဂစ်တာသည်မ - “ပြန်မလာခဲ့နဲ့” အမေ လမ်းပေါ်မှာ ဂစ်တာကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်။ သူမရဲ့နို့တွေကို အဲဒီထဲ ထိုးထည့်တော့မယ့် အတိုင်း။ လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းအရ ...
ပါပီယှနျပွောပွတဲ့ The Reader - ပါပီယှနျဟာ စာရေးတဲ့နရောမှာ ပါရမီအတျောပါပုံရသလို ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ ဘဝအစုံစုံ၊ လလေ့ာသမြှ ဗဟုသုတအစုံအလငျကွောငျ့ သူရေးသမြှတှဟော တမူထူးခွားလကျရာမွောကျတာဖွဈမယျ...
ဝငျစတနျခြာခြီ(၁၈၇၄ - ၁၉၆၅) - Apessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty. *Winston Churchill (1874 - 1965)* အဆိုးမွင...
The Knot - ချစ်သူနဲ့ချစ်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီ တိတိကျကျဆိုရရင် ဧပရယ်လ ၁ ရက် ၂၀၁၂ ။ ရှေးရှေးတုန်းကတော့ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်နားလည်အောင် သုံးနှစ်သုံးမိုးစောင့်ကြည့်ကြတယ်တဲ့ ...
- ဟက်ပီးဝါး သူရဲကောင်းတွေကလည်း သူရဲကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဗီလိန်တွေကလည်း ဗီလိန်မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဆဲတာက ချစ်လို့ဆိုရင်ကန်တော့တာက ဆဲနည်းတမျိုးလား၊ လှပေမဲ့ ဆင်းရရှာတဲ့မိ...
ဖတ်စာထဲက ခရီး (၂) - တကယ်တော့ ဖတ်စာထဲကခရီးစဉ်အကြောင်း အပိုင်း(၂) ကို မနှစ်ကတည်းက ကျွန်မရေးခဲ့သင့်သော်လည်း အကြောင်းကြောင့်မရေးဖြစ်ခဲ့။ ဒီနှစ် facebook memory မှာ ကျွန်မသွားခဲ့သေ...
Tips Anti Bosan Saat Delay Bagi Kamu Pemilik Tiket Pesawat Pontianak Jakarta - Saat melakukan perjalanan bisnis atau berlibur tidak jarang bisa mengalami kejadian tidak terduga. Salah satu contoh kejadian tidak terduga ketika kamu nai...
" ထာဝရခေါင်းဆောင်များ " - ခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာ တိုင်းပြည်အတွက် ဦးဆောင်သူများစွာပေါ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဦးဆောင်သူတိုင်း ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ခဲ့ကြ။ ဦးဆောင်...
ရင်းနှီးပြီးသား အလွှဲများ - ရုပ်ရှင်အနှေးပြကွက်လို မပေါက်တဲ့ ထီလက်မှတ်ဟောင်းလို ပေါ့ကျ တစ်ခွက်လို မဆုံးတဲ့ လမ်းမကြီးလို တိမ်တိုက်အိမ်မက်တွေလို …………………. ………………………… ဖွင့်မပြောတော့ပါဘူး...
အိပ်​​ပျော်​​နေတဲ့ ​ကြောင်​က​လေး - အိပ်​​ပျော်​​နေတဲ့ ​ကြောင်​က​လေး *** ​ကြောင်​က​လေးက အိပ်​​ချင်​ပြီ၊ ဂျီကျလို့ ​အော်​မြည်​။ မီ မီ မီ ဒီလာခဲ့၊ စာဖတ်​လှည့်​ပါကွယ့်​။ စာဖတ်​ပျင်းတယ်​ အိပ်ေ...
၁၀၀၀ တန်အိပ်မက်လေး - ကျွန်တော်အိပ်ယာနိုးတော့ အဖေရော အမေရောမရှိ။ အမေက ဈေးရောင်းသွား အဖေက ဆိုက္ကားထွက်ပြီ ဖြစ်မည်။ ကျွန်တော့်အတွက် အမေပြင်ထားပေးတဲ့ မနက်စာ ထမင်းကြမ်းခဲနဲ့ ငါးပ...
- ခရီးသွားတဲ့သူတွေကိုအားကျနေရုံသက်သက် ကိုယ်ကဘယ်မှမရောက် ပုံတွေတ၀ကြီးကြည့်ခဲ့ရပြီ
facebookယာ - အရွက်ရယ်ပြာ အကြွားပါးပါးသုတ်လို့ အတင်း အဖျင်း အဆဲအဆို ညာတာအကုန်ထည့် ဂုဏ်ရှိတာလေးလဲ နဲနဲလျေ့ာထည့် ယဉ်ကျေးမှု့လုံးမထည့်နဲ့ အချိန်ရှိတိုင်းစားမို့ ပုံစံလေးမြင်စာ...
Penang 4D3N Free & Easy - Intro - ပီနန်ကျွန်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံ။ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တင်္နလာ၊ အင်္ဂါ။ ဒီလိုတွေ စီစဉ်ကြတာ။ ဒီခရီးကတော့ သွားခါနီး ၂ ရက်အလိုမှ စိတ်ကူးရပြီး ထွက...
Sofia Food Paradise
ကြက်သားလုံးဟင်း (စူကြည်း) - စူကြည်းလို့ခေါ်တဲ့ပန်းသေးရိုးရာဟင်းလေးကရိုးရိုးလေးနဲ့စားရတာအရသာအရမ်းရှိပါတယ်။မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ၊ ဧည့်ဖိတ်၊ မိတ်ဆုံစားပွဲတွေမှာ တည်ခင်းလေ့ရှိပါတယ်။ပြုလုပ်ရလွယ...
နှစ်သစ်ဆုတောင်း - အမှားပို လက်နဲ့ ဘုရားကို ဝှက်ခဲ့သူတွေ အများကို ရှက်ကာ တရားကို မျက်နှာမူပါစေ။ (ကောင်းကင်ကို)
ဆရာမ​လေး​ကို သွားကြူမိသောအခါ - သူများတွေ ပြောနေ ကြတယ်​ ဆရာမလေး တွေ အလှ က မျက်စိ အေးတယ် ဆိုပဲ မယုံဘူး စမ်းကြည့် မယ် ဆိုပြီး အကောင့် ထဲက ဆရာမ တစ်ယောက် ကို စကား သွား ပြောတာ " hi မင်္ဂလာပါ ...
ရုပ်﻿ရှင်﻿ကဗျာ – ၂၄ (﻿မောင်﻿﻿ဒေး) - ကမ္ဘာကို ပတ်﻿﻿နေ﻿သော ဆက်﻿သွယ်﻿﻿ရေးဂြိုလ်﻿တု﻿ပေါ်တွင်﻿၊ ဆရာဝန်﻿ ﻿ပေးလိုက်﻿﻿သော ﻿သောက်﻿﻿ဆေးများ﻿ပေါ်တွင်﻿၊ ကြည်﻿﻿အောင်﻿၏ ကဗျာစာအုပ်﻿ ﻿နောက်﻿﻿ကျောဖုံး﻿ပေါ်တွင်﻿ န...
Htaik Htaik Thone
Concrete Mixer Companies - *Concrete Mixer Companies* - How to Mix Concrete, Cоnсrеtе mіxеrѕ, they соmе ԛuіtе hаndу іf уоu haveabіg job. I'm Fоrоuk Ramadan, andtoday wе'rе gоіng t...
ငါ့ အရာရာ - ငါ့ အရာရာ _____________ ငါ့စိတ်ကူးမိသမျှ ပျံသန်းရာ ကဗျာတွေကိုတောင် ပိုင်စိုးပိုင်နင်းလုပ်နိုင်သူလေးငဲ့… ငါ့ရဲ့ ဥတုသုံးပါးလုံးကို ယူပါ ငါ့ရဲ့ လက်ကို လာဆုပ်...
Blogger ဘ၀ နှင့် Hiker ဘ၀ - တစ်ရံသောအခါက... သပ်ရပ်စွာဝတ်စားဆင်ယင် သပ်ရပ်စွာစကားပြော သပ်ရပ်စွာစားသောက် သပ်ရပ်စွာရယ်မောပျော်ရွှင် သပ်ရပ်စွာ ကြင်နာတတ်သူများနှင့်တွေ့ဆုံဖို့အရေးအား အကြေ...
စာအုပ်ဟောင်းစုဆောင်းခြင်းဝါသနာ - စာအုပ်ဟောင်းစုဆောင်းခြင်းဝါသနာ စာအုပ်ဟောင်းများဝယ်ယူစုဆောင်းရခြင်းကို မည်သည့်အချိန်က စတင်ဝါသနာပါလာမှန်း ပြန်မစဉ်းစားမိခင်မှာပင် ကျွန်တော်သည် စာအုပ်ဟောင်း စ...
စိတ် ကင်ဆာ - ပျော်ရွှင်မှုလား နာကျင်ခဲ့ရတာတွေလား အံကျိတ်ရင်း သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ကျရတဲ့အချိန်တွေလား။ အတိတ်ကံဝဋ်ကြွေးလို့ ငါဖြေသိမ့်ရတိုင်း ဒီအနာက လူမသိသူမသိ ငါကိုင်တိုင် မသ...
မင်းနဒီခ နှင့် သူ၏ အရေးအသားများ
အေးမြ - အေးမြ အေးမြ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးကို နှစ်ဖက်ခွဲစည်းထားတာ ညိုညက်ညက်ပါးပြင်ပေါ်ပါးကွက်ပါးပါးလူးထားတာ အေးမြ ပြုံးလိုက်တိုင်း ကလေးတစ်ယောက်လို ရှင်းသန့်ဖြူစင်လို့ အေးမြ...
Wutyee Gourmet Foods ဟင်းချက်နည်း အမျိုး (၁၀၀) စာအုပ်သစ် - Wutyee Gourmet Foods ဟင်းချက်နည်း အမျိုး (၁၀၀) စာအုပ်သစ် ” Wutyee Gourmet Foods ဟင်းချက်နည်း အမျိုး (၁၀၀) စာအုပ်သစ် ထွက်ပြီ” – ချစ်ခင် လေးစားရပါသော အန်တီ၊ ...
BLISS OF US
Bliss of Us မြန်မာတို့ရဲ့ ဒုတိယအိမ်မှသည် SanoMaru Home စ နို မာ ရု အိမ်ကလေးဆီသို့ ~ ~ ~ - Thai နိုင်ငံမှာ ဂျပန်-ထိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဒုတိယအိမ်မှသည် SanoMaru Home စ နို မာ ရု အိမ်ကလေးဆီသို့ ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ........
ဘဝတွေက ခါးတယ် - *အခန်း ( ၁ )* *လာ.. ညီမလေး ထိုင်... အစ်ကိုတို့က ညီမလေး မလာတော့ဘူးထင်နေတာ....* *ချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက် နှစ်နာရီတောင် နောက်ကျတာဆိုတော့လေ.... နောက်တစ်နာရီေ...
ပြင်ဦးလွင် မှာ နောက်ထပ် လည်စရာ တစ်နေရာ တိုးသည်ပေါ့ - မေမြို့ သို့မဟုတ် ပြင်ဦးလွင် ကို အရောက်အပေါက်များတဲ့ ကျွန်တော့အတွက် လည်စရာတွေက ထပ်လာတော့ သွားရတာ ပျင်းစရာဖြစ်လာတယ်။ ရာသီဥတုလေး သဘောကျလို့သာ သွားရတယ်၊ သိ...
- ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ သည်ဗွိုက်ဒေးလီးနေ့စဉ်သတင်းစာ ဝဋ်ကြွေး (မင်းဒင်) လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်ကပေါ့။ကျုပ်သူငယ်ချင်းတယောက် ရဲ့ညီိဟာ လူထူးလူဆန်းဗျ။ဒီကေ...
- 2013 - 2014 ပညာသင်နှစ် လွို င်ကော်တက္ကသိုလ်နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း
၃၁ - သြဂုတ် မျှော်ချင်း - လွမ်းချင်းလည်း ငါ မဆို အိုင်ချင်းလည်း ငါမရေး အဲချင်းလည်း ငါ မသီ ခု ငါ့တိုင်းပြည်အတွက် "မျှော်ချင်း "သက်သက် ကဗျာသစ် ရင်ထဲက ကို ဖြစ်တည်လာ ဆွေ မြန်မာတို...
ရူးတဲ့စိတ် - ကြယ်တပွင့်ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီး မွေးစားဖို့က ၁၀ ဒေါ်လာမျှသာ အရှားပါးဆုံး ဆိုတဲ့ ငွေဒင်္ဂါးရဲ့ တန်ကြေးဟာ မြန်မာကျပ်ငွေ ကုဋေ ၁,၀၀၀ မက မဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ...
အကြွေစေ့သုံး တယ်လီဖုန်း - အကြွေစေ့သုံး တယ်လီဖုန်း တစ်ခုခုအတွက် ရှိနေသေးသလိုလို၊ မေ့လျော့စွာ ကြွင်းကျန်ရစ်သလိုလို နံရံကိုမီတွယ်ထားတယ်၊ အရေးကြီးခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကို စောင့်နေရသလို၊ ပုံပြင်ေ...
လေ ပြေ - လေပြေ မင်းပြောဖူးတဲ့ ကဗျာလွတ်စကားတွေ ငါ့ ရင်ကို တစ်ခါ တိုက်ခတ် မလားလို့ နေ့နဲ့ည ဆက် စောင့် နေခဲ့မိတယ် ချို သော မွှေးသော တန်စိုးမဲ့ တမ်းချင်းတွေ အတိတ် တွေက...
မနှင်ဘဲနောက်လှည့်ပြန်ခဲ့သည် - *မနှင်ဘဲ နောက်လှည့်ပြန်ခဲ့သည်...* မိုးသက်ဦးလွင် Marshell အမှတ်တံဆိပ် နားကြပ်ကို နားမှာတပ်လိုက်သည်..။ ဒီလိုအချိန်ဆိုရင် မိုးလွင် လုပ်ငန်း စပြီ...
အဝါရောင်ကျီးကန်းတွေ ငါ့ဆီပြိုဆင်းလာတဲ့နေ့က - ခုတလော ဖြစ်နေပုံက ခဏခဏ မိုးတွေရွာတယ် ..တစိမ့်စိမ့် ငုံ့ကြည့်လိုက်တိုင်း အုံ့ဆိုင်းမှိုင်းညို .. အမှတ်သည်းခြေ မရှိသလိုပဲ ထင်ရာမြင်ရာ နေကလည်း ခြစ်ခြစ်တောက်ပူ.....
Optimistic, Love and Life - ဒီရက်ပိုင်း ကျနော်က ကိုယ့်ကိုကိုယ်မြေမျြပ်သင်္ဂြိုလ်ထားတဲ့သူလို.။ဘ၀ရဲ့ အဓိပါယ်တွေ၊အတွေးအခေါ်တွေ တမျှော်ကြီး ပုံဖော်ကြည့်ဖို့လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ပစ္စုပန်ကိုတည့်တည...
ယနေ့မှစ.. - တစ်ယောက်ရင်ထဲက စကားကို တစ်ယောက်က မကြားရသည့်အခါ ကျွန်မတို့နှစ်ဦး ကျောချင်းကပ်လျှက် ဝေးကွာ နေသလို ခံစားလာရသည်။ အနေနီးနေပါလျှက် ကမ္ဘာခြားနေသလို ခံစားနေ...
မှတ်တိုင် ၃၃။ - အသက်တွေလဲ မငယ်တော့ဘူး။ ဒီနေ့ပဲ ၃၃ နှစ်ပြည့်ပြန်ပြီ။ အသက်ကြီးလာလေ အချိန်တွေက မြန်လာလေပဲ။ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ်ဟာ ဘာမှမကြာလိုက်သလိုပဲ။ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ပြောင...
2015 ဒီဇင်ဘာ - တစ်နှစ် လည်​ခဲ့ပြန်​​ပေါ့။ ဒီဇင်​ဘာဟာ ကိုယ့်​အတွက်​​တော့ နှစ်​ပတ်​လည်​ပဲ။ ကိုယ်ဟာ ဒီဇင်ဘာဖွားတစ်ယောက်ပါလေ။ :P Sweet December <3 ဆွိဒီဇင်​ဘာလို့တော့မဆ...
Organic Garden Guide to Controlling Pests for Your Vegetables (part2of 2) - http://www.bromotravelindo.com Aphids You will often find sticky groups of insects that are invading your garden in hues of red if you have aphids in your...
အားငယ်နေတဲ့သူရဲကောင်း - credit : google.com *အားငယ်နေတဲ့သူရဲကောင်း* ဘဝရဲ့စွန့်စားခန်းတွေထဲ ငါဟာ သူရဲကောင်းအလား လက်ခုပ်တီး အားပေးမယ့်သူမရှိ နောက်လိုက်ဗိုလ်ပါမရှိ ဟန်ပန်တွေအပြည့်...
လက်ဆောင် - သေမင်းဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခြင်းကို ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း သတ္တ၀ါတိုင်းဟာ ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀ တစ်ခုကိုရလာကြတဲ့သူတိုင်း သေမင်းရဲ့အစာဖြစ်ကြရ တာ...
သုညတွေကို ငါ့လွယ်အိတ်ထဲဘယ်သူထည့်သွားခဲ့တာလဲ - သုညတွေကို ငါ့လွယ်အိတ်ထဲဘယ်သူထည့်သွားခဲ့တာလဲ ================================= ခေတ်ကိုက အသံစုံမြည်နေတာ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့စနစ်တွေကို တထပ်ခြင်း တလွှာခြင်းချ...
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း ပြောပြခြင်း - နန်း မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း ပြောပြခြင်း >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ကိုယ့်ချစ်သူကို တစ်သက် မခွဲ လက်တွဲ လိုလျှင်… (၁) မနှိုင်းနဲ့ "သူ့မိန်...
အသံတိတ် တနင်္ဂနွေ - တိတ်တိတ်ငိုကြွေး မျှော်လွမ်းခဲ့ တစ်ညနေ..... ထွေးပိုက်ခွင့်ဝေး အစိမ်းရောင်မျက်ဝန်းတွေကို ခိုးခိုးရှိုက်ရင်း မိုးလင်းသွားတဲ့ တနင်္ဂနွေ.....။ အပြစ်ပေြး...
★ မြန်မာစာတန်းထိုး ★
Ice Age: The Meltdown (2006) မွနျမာစာတနျးထိုး - *ဇာတျကားအမညျ *၊ Ice Age: The Meltdown *ဒါရိုကျတာအမညျ *၊ Carlos Saldanha *အရညျအသှေး *၊ လုံးအကွညျ *စာတနျးထိုးသူ *၊ watchmyanmarmovies.com *Download* လုပျ...
အမှောင်ထုထဲက အလင်းစက်များ 14.11.2010 တွင် share သည် - ဟုတ်ကဲ့ ဘောလုံးပွဲစတယ်ဆိုတာနဲ့ Firefox က Google ကို စ ပေးတယ် ခင်ဗျ.... Google က Facebook ကို ထပ်ပေးပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ တက်တယ်ခင်ဗျကျတယ် ခင်ဗျ ပြန်တက်တယ်။ ပြန်ပြ...
မျက်နှာများတဲ့ အမှန်တရား - အရည်တစ်ခုထဲမှာ သို့မဟုတ် ဓါတ်ငွေ့တစ်ခုထဲမှာ မျောပါနေတဲ့ အမှုန်လေးတွေရဲ့ ရွေ့လျားမှူတွေဟာ အတည်တကျ တွက်ချက်လို့မရပဲ အမြဲကစင်ကလျား ရွေ့ချင်သလို ရွေ့နေတတ်တယ်။...
ငါလူသားပီသပြီလား - “မနုဿတ္တဘာဝေါ ဒုလ္လဘော” ဟူသည်နှင့်အညီ လူ့ဘ၀သည် အလွန်ပင်ရခဲလှ၏။ လူ့ဘ၀ရခဲလှပုံကို ဤကဲ့သို့ ပမာပုံနှိုင်းဆို ကြ၏။ “ဗြဟ္မာ့ပြည်က အပ် တစ်စင်း၊ လူ့ပြည်က အပ်တစ်စင်...
လူမိုက် လက္ခဏာ လေးပါး - လူမိုက် လက္ခဏာ လေးပါး (၁) တခုအမှား၊ ပြုမိငြားလျက်၊ (၂) တပါးသူကို၊ ပြုရန်ဆိုကာ၊ (၃) ထိုအမှားအား၊ တန်ဘိုးထား၍၊ (၄) မှားပြီဆိုလျှင်၊ ရန်ရှာချင်သေး၊ အမြင်မမှန်၊...
“အမေ့ရင်ခွင်’’ - ပန်းမြိုင်လယ် မာလာထက် ဆယ်ဖြာစွာ ရနံ့စွက်တဲ့နေရာ.. တောတောင်လယ် စမ်းရေထက် ရာချီကာ ချမ်းမြတဲ့နေရာ.. ရာသီစုံ မေတ္တာထက် ထောင်သောင်းမက စစ်လှတဲ့နေရာ.. ပျူငှာဖွယ် အ...
❤ ကျွန်တော့်ဥယျာဉ်လေး ❤
World War Z (2013) (စာတမ်းထိုး) - မိစ္ဆာတွေ ဖုံးလာတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ...ဘယ်လိုတွေဖြေရှင်းကြ သတ်ကြဖြတ်ကြ ပြေးကြလွှားကြရမလဲဆိုတာ ရင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးပါ..... Zip File size...555MB Qualit...
လတ်တလောစားဖြစ်သောအစားအစာလေးများ (၂) - မနေ့ ကအပိုင်း (၁) ပြီးသွားပေမယ့်  ဓါတ်ပုံတွေ ကအများကြီး ကျန်သေးလို့  ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်မှာ ကိုယ့် ဖာသာကိုချက်စားတာတွေရော ၊ အပြင်မှာဝယ်စားတာတွေ ရောပ...
စာပေမောင်နှမများနဲ့အတူ ၀တ္ထုတိုနှစ်ပုဒ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် -
မသိခြင်း - မညှာ မသနား လှည့်ဖျား လိမ်ညာ သစ္စာ စည်းဖောက် မေတ္တာ ပျောက်၍ ကျောခိုင်းရက်သည် ဘယ့်အတွက်ကြောင့် လုပ်ရက်လေသလဲ အဖြေလဲ ညှိမရ ဒဏ်ရာများနဲ့ ရှေ့ဆက် ဒီဘ၀နဲ့သာ ၀ဋ်ကြွေ...
အဖိုးတန်သူများ ကြား အနေခက်လှ - အုပ်စုဖွဲ့ နေထိုင်တက်သူများ သည် တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း နေရမှာ ကို ကြောက်ရွံ့သူများလေလော...။ တစ်စုံ တစ်ရာ ကြုံတိုင်း၊ အရေးကိစ္စရှိလေတိုင်း အုပ်စုဖွဲ့ကာ ကိုယ့်အုပ်...
သူ .... သိစေ။ - ကျနော် ပုံအောထားတဲ့ အဲ့ဒီအလင်းတွေ သူ့တစ်ကိုယ်စာ ကျနော် ... လဲ့ဖြာရူးသွပ်ထားတယ်။ လမင်းအနားသတ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ၀လုံးရဲ့ အစဦးပိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော် သိမ်းပို...
သုံးယောက်ဂိုဏ်း - သုံးယောက်ဂိုဏ်း အကောင့်တစ်ခုကို သုံးယောက်သုံးတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို သုံးယောက်ကြိုက်တယ်။ အိမ်မက်တစ်ခုကို သုံးယောက်မက်တယ်။ မင်းအိမ်ထောင်ပြုတော့ ငါ့ကိုမခေါ်ဘူး...
. * . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * .
- အမှတ်စဉ်(၃) ကဲ… ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Verb အကြောင်းတွေ ပို့ချပြီးသွားပြီ။ အဲဒီ Verb တွေကို စာကြောင်းတွေမှာဘယ်လိုသုံးမှာလဲ။ သုံးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို စည်းကမ်းတွေ ရှိသလ...
ကျနော် တစ်ယောက်တည်း - လောကမှာ တုနှိုင်းလိုမရအောင်မေတ္တာ အကြင်နာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အေးမြသောနှလုံးသားပိုင်ရှင် က အဖေ နဲ့ အမေ ၂ဦးထဲပါ... ငယ်ငယ်တုန်းက လိုတာမရလို စိတ်ကောက်တာတွေ.....
အခန်းဆက် အလွမ်းစက် - အဝေးပြေးကားတွေပေါ် အဝေးပြေးဘဝတွေ ထိုင်ခုံလွတ်မရှိဘူး ကျွတ်ကျခဲ့တဲ့ ဖိနပ်တစ်ဖက်ဟာ ငယ်ဘဝ ဆိုလား အရှိန်နဲ့ တစ်မြို့ စီ ဖြတ်တယ် အရိပ်မရလို့ခုတ်ထစ်ခံ လိုက်ရတဲ့ လ...
♥My Own Little World♥
ပေါက်ကွဲသည် - စိတ်ထဲမှာ အဲ့ဒီ့လူကို တော်တော် ဘ၀င်မကျဖြစ်နေတယ် နေရင်းထိုင်ရင်း သူများတကာကို ကြည့်မရဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီ့လူဆိုတာ အဝေးကြီးကမဟုတ်ပါဘူး ဘေး အခန်းက Suzy လို ...
၀က်သားလုံး ချိုချဉ် - ၀က်သားလုံးကြော်ရန် ၀က်သားလုံးချိုချဉ် ၂ယောက်စာ အတွက် ပထမဆုံး ၀က်သားအကြေ ၂၅၀ ဂရမ်ကို သကြား တစ်ဇွန်း၊ ဟင်းခတ်မှုန့် (ကြက်သားမှုန့်+ ငရုပ်ကောင်းအဖြူ+ ဆား)တစ်...
“ ချူး...အီး ဆုတောင်း ” - စာရေးချင်ပေမယ့်မရေးဖြစ်ခဲ့ သည်မှာ ကြာခဲ့ ပြီ။ ကိုယ့် ဘလော့ လေးကို သတိရမိတိုင်း မကြာခဏ ဝင်ကြည့် တတ်သော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ မကြာခဏကနေ၊ ကြာတာက ခဏခဏ...
နောက်ပြန်မလှည့်စတမ်း လျှောက်ရမဲ့လမ်း - သည်ဆောင်းဟေမာန် နှင်းငွေ့ရည်မပျယ်သေး အအေးဓာတ်ရယ် ပေါ့ပျက်ပျက် အခါနှစ်ဦး အချိန်သမယမှာဖြင့် အရှေ့တောင်ပိုင်းက ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ သဘောတူညီမှုရခဲ့ကြပြီ မဂ်...
ကျွန်တော်နှင့် တက္ကသီလာ မှ အက္ခရာများ (၄) - +ဆရာ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက .. ခေါင်းလောင်းဆွဲထားပေးတဲ့ခွေးကို အမှိုက်ထုပ်တပ်ပေးသလို လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ခြင်း တစ်ခုလို့ ထင်...
လွတ်မြောက်ခြင်း - ထိလွယ်ရှလွယ် နှလုံးသားတစုံနဲ့ ကြေလွယ်ကွဲလွယ်တတ်တဲ့အဖြစ် မာချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်အပျော့စားများအတွက် အလွမ်းတွေကတသက်စာ..... မာန်တင်းထားတဲ့နောက်က ပုန်းလှ...
ခရမ်းရင့်ပြာ - (၁) စက္ကန့်ပေါင်းများစွာကြီးစိုးနေခဲ့တာကြာပြီ။ တိတ်တဆိတ် ၀င်ရောက်လာခြင်းများနှင့် တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားခြင်းများ မှာ အခန်းကျဉ်းလေးနှင့် အဲဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲက ...
ဇိုရိုအက်စတာပေါ်ပေါက်လာပုံ - ပါးရှား(အီရန်)ပြည်သည် ဇိုရိုအက်စတားမပေါ်ပေါက်မီက နေ ဘုရား။လဘုရား ။ကြယ်ဘုရား၊တောဘုရား တောင်ဘုရား စသည်တွေကိုရုပ်ထုများနဲ့ တကွကိုးကွယ်ကြသည်။ ကိုးကွယ်ရေး အသိညဏ်...
အုပ်ကြီး .. ကဗျာမဟောင်းတဟောင်းများ
Copyright © 2010 Jasmine Blogger Template by Dzignine